Dowladda Federaalka Soomaaliya oo la wareegtay ciidamada booliiska Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Federaalka Soomaaliya oo la wareegtay ciidamada booliiska Puntland
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo la wareegtay ciidamada booliiska Puntland
December 25, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Booliis ku sugan xerada tababarka booliiska Carmo, Puntland. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la wareegtay ciidamada booliiska Puntland, sida ay ku warantay idaacada maxaliga ah ee Radio Daljir, oo soo xiganaysa saraakiil katirsan ciidamada.
Tirakoob ku saabsan ciidamada booliiska eek u sugan Puntland ayaa maalmihii u dambeeyay waxay Dowladda Federaalka ka waday gudaha magaalooyinka waa-weyn ee Puntland, sida warbixintu sheegtay.
Ciidamada la diiwaangeliyay ayaa waxaa mushahaarkooda siin doonta Dowladda Federaalka Soomaaliya laga bilaabo xilligan.
Hoggaamiyaashii hore ee Puntland soo maray ayaa diiday soo-jeedino ay madaxdii hore ee Dowladihii Federaalka ku doonayeen in ciidamada Puntland lagu wareejiyo Dowladda Dhexe si ay iyadu u maamusho gunno-siinta iyo taliskooda.
Xukuumada hadda wakhtigeedu dhammaanayo ee Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali kama aysan hadlin la wareegista ciidanka booliiska Puntland ee Dowladda Federaalka.
Isimada Puntland oo soo saaray bayaankoodii ugu horeeyay ee ku saabsan doorashada
Shaqaale katirsan DFS oo ku dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
Garowe-(Puntland Mirror) Ciidamo gaaraya 160 askari oo katirsanaa maamulka Somaliland ayaa isku soo dhiibay Puntland, sida uu baahiyay taleefishinka dowladda Puntland ee PLTV Axadii. Ciidamada ayaa ku sugnaa deegaanka Caroweyn ee gobolka Ceyn, sida uu [...]
Puntland deports over 30 immigrants to southern Somalia
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland has deported more than 30 people to southern Somalia, sources confirmed to Puntland Mirror. According to the sources, most of the deportees, were detained by the Puntland security authorities as they boarded [...]